ငွေရှာကြပါစို့။ လူမှုမီဒီယာအသွားအလာကိုအရောင်းသို့ပြောင်းလဲရန်နည်းလမ်း ၈ ခု | Martech Zone
ငွေရှာကြစို့။ လူမှုမီဒီယာအသွားအလာကိုအရောင်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်နည်းလမ်း ၈ ချက်
သောကြာနေ့, သြဂုတ်လ 17, 2018 တနင်္လာနေ့, အောက်တိုဘာလ 18, 2021 အန်နာ Bredava
ဆိုရှယ်မီဒီယာရောင်းအားသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူများအတွက် စိတ်အားထက်သန်မှုအသစ်ဖြစ်သည်။ ခေတ်နောက်ကျသောယုံကြည်ချက်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာရောင်းချမှုသည် မည်သည့်လုပ်ငန်းအတွက်မဆို အမြတ်အစွန်းရနိုင်သည် — သင်၏ပစ်မှတ်ပရိသတ်သည် ထောင်စုနှစ်များ သို့မဟုတ် မျိုးဆက် X၊ ကျောင်းသူများ သို့မဟုတ် ကြီးမားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များ၊ ပြင်ဆင်သူများ သို့မဟုတ် ကောလိပ်ပါမောက္ခများဖြစ်မဖြစ် အရေးမကြီးပါ။ တွေးတောမှုတွေ ရှိတယ်။ သုံးဘီလီယံတက်ကြွလူမှုမီဒီယာအသုံးပြုသူများသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာမင်းရဲ့ထုတ်ကုန်ကို ၀ ယ်ချင်တဲ့သူမရှိဘူးလို့မင်းတကယ်ပြောနိုင်သလား။ မင်းရဲ့အလုပ်ကဒီလူတွေကိုရှာဖို့ဖြစ်တယ်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆိုရှယ်မီဒီယာအရောင်းအ ၀ ယ်များသည်အားသာချက်များစွာရှိသည်။ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းသည်အတော်အတန်ဈေးပေါပြီး၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသူအဖြစ်ရှုမြင်သည်။ ငါ့စကားလုံးကိုမင်းယူစရာမလိုတော့ဘူး၊ ဘယ်လောက်များများကြည့်ပါ ဦး ကုမ္ပဏီများသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်သုံးစွဲနေကြသည်. ဒါဆိုအကျိုးအမြတ်ရဖို့ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမင်းဘယ်လိုသုံးမလဲ။
သုတေသနသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏သန့်ရှင်းသော Grail ဖြစ်သည်။ သင်၏ထုတ်ကုန်ကို ၀ ယ်လိုသူသည်မည်သို့ပြုမူပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်ကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနားလည်ခြင်းမရှိဘဲမည်သည့်အရာကိုမရောင်းနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်အရောင်းအဝယ်၏နောက်ကွယ်ရှိအရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဘယ်ဟာ လိုင်းများ လက်ရှိသင့်ရဲ့ကတော့ဖို့ဆောင်ဆောင်ခဲ့သလဲ?
ဘယ်လောက်လဲ အချိန် သဘောတူညီချက်ပိတ်ဖို့ယူပါသလား?
ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေကသင့်ကိုအံ့အားသင့်စေနိုင်တယ် - သင်တစ်လျှောက်လုံးမှားယွင်းတဲ့ပလက်ဖောင်းများကိုအာရုံစိုက်နေကြောင်းသင်သိကောင်းသိလိမ့်မည်။ ဤကိစ္စတွင်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်အကောင်းဆုံးဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းကိုရွေးချယ်ရန်အတွက်သုတေသနအနည်းငယ်ပြုလုပ်ရန်သင့်အတွက်အသုံးဝင်သည်။
သင်၏ပြိုင်ဘက်များ၏လူမှုမီဒီယာလှုပ်ရှားမှုများကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်၎င်းတို့အတွက်မည်သည့်ပလက်ဖောင်းများသည်တန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ်ကြောင်းမြင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုသင်လုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်လုပ်ရန်ပိုမိုထိရောက်ပြီးကြော့ရှင်းသောနည်းလမ်းရှိသည်။ သင်လိုအပ်သမျှသည်လူမှုဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် Awario။ ၎င်းနှင့်အတူသင်ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်ဝဗ်ပေါ်ရှိမည်သည့်သော့ချက်စာလုံးကိုမဆိုအချိန်နှင့်တပြေးညီဖော်ပြနိုင်သည်။
သင်က startup များအတွက် SaaS တစ်ခုလုပ်နေတယ်ဆိုပါစို့။ သင်က“ startup” ကိုသင်၏သော့ချက်စာလုံးတစ်ခုအဖြစ်ထည့်ပြီးမည်သည့်ပလက်ဖောင်းများတွင်ဖော်ပြချက်များများပိုများကြောင်းနှင့်သင့်ထုတ်ကုန်နှင့်သက်ဆိုင်သောဆွေးနွေးမှုများပိုမိုပြုလုပ်သည်။ ဤနည်းဖြင့်သင်ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်သည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုသိရှိပြီးသက်ဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းများကို ဦး စားပေးနိုင်သည်။
လူမှုမီဒီယာတွင်သင်ပုံမှန်အားဖြင့်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းစဉ်အစောပိုင်းကာလ၌ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့် ၀ ယ်သူများကိုလက်လှမ်းမီသည်ကိုသတိရပါ။ ယခုကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိအမြင်အဆင့်ကိုသုံးခုခွဲခြားထားသည် (ထိတွေ့မှု၊ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု) ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ဆိုရှယ်မီဒီယာအရောင်းမဟာဗျူဟာကိုသင်ပုံဖော်ရန်လိုအပ်သည်။
ရိုးရာကြော်ငြာခေတ်ကုန်သွားပြီ - ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်တစ်စုံတစ် ဦး ၏ဝယ်ယူမှုအပြုအမူကိုလွှမ်းမိုးရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းကိုပြန်ပေးဆွဲခဲ့သည်။ အဲဒါဘာကိုအံ့? နေတာလဲ။ ဒါဟာပါးစပ်စကားလုံးပါ။ တကယ်တော့အရသိရသည် Nielsen, လူမျိုး၏ 92% အခြားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပုံစံများနှင့် ပတ်သက်၍ မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုထံမှအကြံဥာဏ်များကိုယုံကြည်စိတ်ချခြင်းနှင့် စားသုံးသူများ 77% မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်မိသားစုထံမှ၎င်းအကြောင်းကိုလေ့လာသောအခါထုတ်ကုန်အသစ်တစ်ခုကို ၀ ယ်ယူရန်ပိုများသည်။ သင်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိသောလူများအားသင်ယုံကြည်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းသည်သဘာဝကျသည်။
လူမှုမီဒီယာသည်ရည်ညွှန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ ဤပလက်ဖောင်းများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့သူငယ်ချင်းများနှင့်အတွေ့အကြုံများနှင့်အံ့သြဖွယ်ရာရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များကိုမျှဝေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါကြောင့်သင်ငွေရှာဖို့လုပ်ရမှာကလူတွေကိုသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုတင်ဖို့အားပေးဖို့ပါ။ သင်သည်သူတို့အားသေးငယ်သောလျှော့စျေးတစ်ခုသို့မဟုတ်နမူနာတစ်ခုကဲ့သို့သောမက်လုံးသေးသေးလေးများကိုပင်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။
ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များအားလုံးကိုအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောတုံ့ပြန်ရန်မမေ့ပါနှင့်။ စားသုံးသူများ 71% ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာ ၀ န်ဆောင်မှုအတွေ့အကြုံကောင်းရှိသူများသည်၎င်းကိုအခြားသူများအားအကြံပြုရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဘက်မှလူမှုရေးမီဒီယာတွင်ပါ ၀ င်မှုသည်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဖောက်သည်များအကြားဆက်နွယ်မှုကိုဖန်တီးပေးပြီး၎င်းတို့အားကြားနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။ ၎င်းသည်ထိန်းသိမ်းထားရန်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။
လူများသည် ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင် အမှတ်တံဆိပ်များအကြောင်း ၎င်းတို့၏ အတွေးအမြင်များကို မျှဝေလိုကြရုံသာမက အကြံပြုချက်များရယူရန် ဆိုရှယ်မီဒီယာသို့လည်း မကြာခဏ လှည့်လာကြသည်။ အဲဒီ့မှာ သင့်မှာ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ ဦးဆောင်လမ်းပြတွေ ရှိပြီးသားပါ - သူတို့ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ Facebook အဖွဲ့များ၊ subreddits၊ Twitter chats စသည်တို့ကဲ့သို့ သက်ဆိုင်ရာ အသိုင်းအဝိုင်းများကို စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့ကို သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ၎င်းအတွက် ဆိုရှယ်နားဆင်ခြင်းကိရိယာကိုလည်း သင်သုံးနိုင်သော်လည်း ၎င်းတွင်ကဲ့သို့ အရာတစ်ခုခုရှိကြောင်း သေချာပါစေ။ Boolean ရှာဖွေရေးနည်းလမ်း, သင်သည်သင်၏ရှာဖွေမှုများကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်တိကျပြီးပြည့်စုံစေရန်ပြုလုပ်ရန်သင်၏မေးမြန်းချက်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်သည်။
သင့်အမှတ်တံဆိပ်ကို အရင်က မထိတွေ့ဖူးတဲ့ သူစိမ်းတွေကို သင်တုံ့ပြန်ရမယ့် သာဓကများစွာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး အချိန်ယူပါ။ စိတ်ခံစားမှုကင်းမဲ့သော အရောင်းမြှင့်တင်မှုဖြင့် ၎င်းကို တည့်တည့်မဝင်ပါနှင့် — မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါ၊ သင့်ထုတ်ကုန်မှ မည်သို့အကျိုးရှိနိုင်သည်ကို ရှင်းပြပါ၊ ပလပ်ဖောင်းနှင့် ၎င်းတို့၏တောင်းဆိုချက်နှင့် သင့်လျော်သော လေသံနှင့် အသံကိုအသုံးပြုကာ ဤအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုကို အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီး စစ်မှန်ကြောင်းပြုလုပ်ပါ။ ဤနည်းဖြင့် သင်တွေ့ရမည့် ခဲရာတိုင်းသို့ ကွတ်ကီးဖြတ်စက် မက်ဆေ့ချ် ပေးပို့ခြင်းထက် ၎င်းတို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်ခြေ ပိုများပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့ကို ဝယ်ယူရန် လွယ်ကူအောင်လုပ်ပါ — ၎င်းတို့ကို ထုတ်ကုန်သို့ တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်သည့် လင့်ခ်တစ်ခုပေးပါ။
ကူးပြောင်းခြင်းအတွက်သင်၏လူမှုမီဒီယာ Path ကိုအကောင်းဆုံး
လင့်ခ်များအကြောင်းပြောလျှင် ၎င်းတို့သည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လိုချင်သောထုတ်ကုန်ကိုမည်သို့ဝယ်ယူရမည်နည်း။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဖောက်သည်တစ်ဦးသည် သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ လင့်ခ်တစ်ခုကို ချက်ခြင်းမနှိပ်နိုင်ပါက ၎င်းတို့သည် ၎င်းကို ရှာဖွေရာတွင် အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေရန် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။
သင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာမှာ သင့်ပရိုဖိုင်တစ်ခုစီတိုင်းတွင် လင့်ခ်များကို ထည့်သွင်းပြီး ၎င်းတို့ကို မြင်နိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ပရိုမိုးရှင်းပို့စ်တစ်ခုတင်ပါက — ထိုနေရာတွင် လင့်ခ်တစ်ခုထားလိုက်ပါ၊ သင်သည် သင့်ထုတ်ကုန်များထဲမှ တစ်ခုကို ပေါ့ပေါ့တန်တန်ပြောနေပါက၊ လင့်ခ်တစ်ခုကိုလည်း ထိုနေရာတွင် ထားလိုက်ပါ။ အစောပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ဆွေးနွေးခဲ့သည့် ညွှန်းဆိုချက်များကို တုံ့ပြန်သည့်အခါတွင်ပင်၊ သင် ဆွေးနွေးနေသည့် ထုတ်ကုန်တစ်ခုသို့ လင့်ခ်တစ်ခု ထည့်နိုင်သည်။
သငျသညျ ဦး ဆောင်ရတဲ့အခါ, သင်ကသူတို့ပြောင်းလဲခြင်းမှတစ် ဦး တည်းသာကလစ်နှိပ်ပါကွာသေချာအောင်ချင်တယ်။ အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနောက်ဆုံးအဆင့်တွင်ရပ်တန့်ရန်အတွက်သာအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလူမှုမီဒီယာအရောင်းမဟာဗျူဟာကိုဖန်တီးရန်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ၀ ယ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်သင်၏အလားအလာရှိသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုသေချာစေမည့်ပြီးပြည့်စုံသောမြေပေါ်စာမျက်နှာကိုသင်လိုအပ်သည်။ သင်၏ landing page ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်စိတ်ထဲထားရန်လိုအပ်သည့်အရာအနည်းငယ်ရှိပါသည်။
Loading မြန်နှုန်း။ ဖောက်သည်များသည်ပျင်းရိရုံမျှမကစိတ်မရှည်ကြသည် (စိတ်မကောင်းပါ၊ ဖောက်သည်များ) ။ သင်၏စာမျက်နှာကိုဖွင့်ရန်သူတို့မျှော်လင့်နေကြသည်3စက္ကန့်ပျှမ်းမျှတင်ချိန်သည် ၁၅ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့မစောင့်ရန်သေချာပါစေ။
က Short နဲ့ရိုးရိုး။ သင်၏ထုတ်ကုန်သည်အသေးစိတ်တစ်ခုချင်းစီတွင်အဘယ်ကြောင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သနည်းဟူသောအကြောင်းပြချက်တစ်ခုစီကိုစာရင်းပြုစုရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်၏အလားအလာရှိသော ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူကိုအပိုဆောင်းအချက်အလက်များနှင့်အာရုံမပြေစေလိုပါ။ သင်၏တန်ဖိုးကိုပြန်လည်ဖော်ပြရန်မက်ဆေ့ခ်ျကိုရိုးရှင်း။ သန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ပြီးအပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုသီးခြားလွယ်ကူသော - သတိပေး tabs များထဲတွင်ထည့်ပါ။
နောက်ထပ်တစ်ခါ, ယုံကြည်ကိုးစားမှုနှင့်ရည်ညွှန်း ပြောင်းလဲခြင်းကိုပြီးမြောက်ရန်သင်ဖောက်သည်များ၏ယုံကြည်မှုလိုအပ်သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသူသည်ဝယ်သူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သင်၏အမှတ်အသားသို့မဟုတ်ခေါင်းစဉ်တွင်သင်၏အမှတ်တံဆိပ် (သို့) သုံးစွဲသူ၏ထောက်ခံချက်ကိုသင်၏မျက်စိတွင်ကြည့်ရှုရန်သေချာစေပါ - တစ်နေရာရာတွင် scroll လုပ်စရာမလိုဘဲအလျင်အမြန်မြင်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ဆွေးနွေးထားပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာ ဦးဆောင်သူများသည် သမားရိုးကျ ဦးဆောင်သူများထက် အရောင်းလမ်းကြောင်းသို့ စောရောက်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းတို့သည် ဝယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသော်လည်း ၎င်းတို့ကို သင်လစ်လျူရှုနိုင်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။
ဤတွင်သင်သည်ပျော့ပြောင်းပြောင်းများအတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့ပြုရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာအီးမေးလ်ကြေးပေးသွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်ကဖျော်ဖြေရေးနှင့်အဖိုးတန်အကြောင်းအရာနှင့်သူတို့ကိုပေးသဖြင့်ဖောက်သည်မှဤတရားမျှတသင့်ပါတယ်။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်း (သင်ခန်းစာများနှင့်ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများ) မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုပြသသည့်ထိထိရောက်ရောက်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာကိုပြုလုပ်ခြင်းသည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအလားအလာရှိသော ၀ ယ်သူများအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အသစ်တစ်ခုကိုထွန်းသစ်စလမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်ပါတယ် messenger စျေးကွက်ရှာဖွေရေးထို့ကြောင့်လူများအားသင်၏သတင်းလွှာတွင်စာရင်းသွင်းရန်တောင်းဆိုမည့်အစား၎င်းတို့အားသတင်းစကားပေးရန်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရုံသာဖြစ်သည်။ လူတွေဟာလူမှုရေးမီဒီယာပေါ်မှာအီးမေးလ်ထက်စာဖတ်တာပိုများတယ်ဆိုတာသက်သေပြနိုင်ခဲ့တယ်။ လေ့လာမှုများအရစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပလီကေးရှင်းများတွင်ပွင့်လင်းနှုန်းထားများ၊ နှုန်းထားများဖတ်ခြင်းနှင့် CTRs များသည်အီးမေးလ်နှင့် SMS စာလျှင် ၁၀X အထိရှိသည်။ ဒါ့အပြင်သင်ဟာသင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့တဲ့နေရာမှာခင်ဗျားသူတို့ကိုရောက်နိုင်ပါတယ်။ လူမှုမီဒီယာပေါ်မှာ။
Strong Call-To-Action ပါ ၀ င်ပါ
သင်၏ CTA သည် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပြီး ပို့စ်နှင့် သက်ဆိုင်သင့်သည် — ဤနည်းဖြင့် ၎င်းသည် အော်ဂဲနစ်နှင့် သင့်လျော်ပုံပေါ်ပါမည်။ မှတ်ချက်တစ်ခု ထားခဲ့ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ အတွေးအမြင်များကို မျှဝေရန်၊ ခေါင်းစဉ်အကြောင်း ပိုမိုလေ့လာရန် သို့မဟုတ် သင့်ထုတ်ကုန်ကို ဝယ်ယူရန် အားပေးမှုတစ်ခုအဖြစ် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်၏ Facebook စာမျက်နှာသို့ CTA များထည့်ခြင်းသည် တိုးများလာစေနိုင်သည်။ ကလစ်နှိပ်မှတဆင့်နှုန်း ၂၈၅% ဖြင့်။ သင်သည်မည်သည့်လင့်ခ်များထည့်သွင်းပါကချက်ချင်းပြောင်းလဲရန်သင်၏မြေပုံစာမျက်နှာများကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်သေချာစေရန်မမေ့ပါနှင့်။
နောက်ဆုံးတွင်၊ ဖောက်သည်အသစ်များရရှိရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ သီးသန့်တစ်စုံတစ်ခုကို ပေးဆောင်ရန်ဖြစ်သည်—လူများသည် ၎င်းတို့ရွေးချယ်ထားသောအဖွဲ့၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လိုသည့်ခံစားချက်ကို နှစ်သက်ကြသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း အပြောင်ရှင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ သင့်နောက်လိုက်တွေကို လျှော့စျေးတွေ ပေးဆောင်ဖို့ပါပဲ — သင် မကြာခဏ မလုပ်နိုင်ပေမယ့် ခေါင်းဆောင်အသစ်တွေကို ဆွဲဆောင်ဖို့ တစ်ကြိမ်သာ သဘောတူညီချက်တစ်ခုအနေနဲ့ မှော်ဆန်တဲ့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ပိုမို၍ တီထွင်ဖန်တီးမှုရှိသော (နှင့်စျေးသက်သာသော) နည်းလမ်းသည်သင်၏နောက်လိုက်များအကြားပြိုင်ပွဲတစ်ခုကျင်းပရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, BeardBrand ၎င်း၏လူမှုရေးဆိုင်ရာတည်ရှိမှု 300% တိုးလာနိုင်ပြီး တစ်ပတ်ထက်နည်းသော အီးမေးလ်စာရင်းကို နှစ်ဆတိုးနိုင်ခဲ့သည်။ သင်၏နောက်လိုက်များအား သင့်ပို့စ်ကို မျှဝေရန်နှင့် ပြန်လည်တင်ရန် သို့မဟုတ် သင့်ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတွင် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအရာကို ဖန်တီးရန် တောင်းဆိုနိုင်သည်။ သင်သည် ငှက်နှစ်ကောင်ကို ကျောက်ခဲတစ်လုံးဖြင့် သတ်နေပါသည် — ထိတွေ့မှုနှင့် နောက်လိုက်များ ပိုမိုရရှိလာသည့်အပြင် အနာဂတ်တွင် သင်၏ ဆိုရှယ်မီဒီယာအရောင်းနှင့် ရိုးရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး လှုပ်ရှားမှုများတွင် သင်အသုံးပြုနိုင်သည့် အသုံးပြုသူဖန်တီးထားသော အကြောင်းအရာများကို စုဆောင်းပါ။
Tags: မုတ်ဆိတ်မွေးboolean ရှာဖွေရေးboolean ရှာဖွေရေး mode ကိုပြောင်းလဲခြင်းလမ်းကြောင်းFacebook ကအုပျစုမြားlink လက်ထောက်messenger စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပိုက်ဆံလူမှုရေးမှတ်ချက်လူမှုမီဒီယာဆိုရှယ်မီဒီယာဆင်းသက်စာမျက်နှာပြောင်းလဲခြင်းမှလူမှုမီဒီယာလမ်းကြောင်းကိုလူမှုမီဒီယာဝင်ငွေဆိုရှယ်မီဒီယာအရောင်းလူမှုရေးအရောင်းအပျော့ပြောင်းပြောင်းလဲခြင်းsubredditstwitter ချတ်များ
Anna Bredava သည် Social Media Marketing အထူးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည် Awario။ သူမသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ လူမှုမီဒီယာလမ်းကြောင်းများ၊ အသေးစားစီးပွားရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူမည်သူ့ကိုမဆိုကူညီသည့်ကိရိယာများအကြောင်းရေးသားခဲ့သည်။
Sitelock - သင်၏ WordPress ဝဘ်ဆိုက်နှင့် Vis ည့်သည်များကိုကာကွယ်ပါ
Hypernet - လျှို့ဝှက်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသည့်ကွန်ပျူတာစွမ်းအားထဲသို့ထိပုတ်ပါသို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ရောင်းပါ